Tahirim-bola Iraisam-pirenena Mitaky ezaka maro amin’i Madagasikara
Nanambara ny teo anivon’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) fa mandeha amin’ny tokony ho izy ny toekarena Malagasy.
Fandaharan’asa FEC faha-5 Nankatoavin’ny FMI
Nanomboka tamin’ny 28 mey lasa teo ny fijerena ny tomban’ezaka andiany fahadimy nataon’i Madagasikara amin’ny fandaharan’asa Facilité Elargie de Crédit (FEC).
Fambolena, fiompiana, fahasalamana Mpilatsaka an-tsitrapo 42 hanome tantsoroka
Mpilatsaka an-tsitrapo Amerikanina avy amin’ny Corps de la Paix miisa 42 no nampanaovin’ny Masoivohon’i Etazonia Michael Pelletier fianianana nandritra ny lanonana natao teny amin’ny trano fonenany teny Ambaranjana omaly 6 jona 2019.
Nampirisika ny fanjakana izy ireo hampitombo bebe kokoa ny tetibola amin’ny sehatra sosialy. Tokony ho laharam-pahamehana ny sehatra fanabeazana satria io no fototra hamolavolana ny toe-tsaina izay miteraka fahatongavan-tsaina sy fandraisana andraikitra haingana. Ny olombelona no loharanon’ny harena kanefa izy ihany koa no fototry ny fanapotehana rehefa tsy manana fahalalana. Araka ny fanadihadiana nataon’ny CREM dia mifandray tanteraka amin’ny harinkarena faobe (PIB) ny sehatra fampianarana. Ny fampiakarana 10% izay manome 5,2 tapitrisa amin’ny isan’ny ankizy mianatra eny amin’ny fanabeazana fototra dia mampitombo 3,5% ny PIB. Mitovy amin’izay ihany koa, ny fampitomboana 10% ny isan’ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga faharoa dia manatsara ny volam-panjakana hatrany amin’ny 0, 77%. Ankoatr’izay, raha akarina 10% ny tahan’ny fampidirana mpianatra eny amin’ny fampianarana ambony dia hiakatra hatrany amin’ny 0,8% ny PIB. Tahak’izay ihany koa ny sehatra fahasalamana sy ny rano fisotro madio. Tsikaritra fa ambany be ny tetibola atokan’ny fanjakana ho an’ny sehatra sosialy, hoy ny CREM. Raha tsy izao dia efa maka fanapahan-kevitra ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin’io fampitomboana io tetibola io dia hiteraka voka-dratsy izany. Tokony hakarina 20%, hoy izy ireo ny tetibolan’ny sehatra fampianarana, 15% ny fahasalamana. Etsy an-daniny dia mila miakatra 75% ny Malagasy misitraka ny rano fisotro madio afaka 5 taona raha 50% izy amin’izao. Fotoana tokony hanaovana asa no lany amin’ny fitadiavana rano sy lavapiringa eto Madagasikara ary amin’izany anefa dia misy hatrany ny vola very.